Jọn 20 | Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl | Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ (2007)
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Albanian Sign Language Alur American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Cubeo Czech Czech Sign Language Dangme Danish Drehu Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Catío) Emberá (Northern) English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Flemish Sign Language French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Greenlandic Guahibo Guambiano Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Inga Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Creole Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kenyan Sign Language Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Krio Kwangali Kwanyama Laotian Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Macushi Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Maya Mexican Sign Language Mixtec (Guerrero) Moore Motu Mozambican Sign Language Myanmar Myanmar Sign Language Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Punjabi (Roman) Páez Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quechua (Huaylla Wanca) Rapa Nui Romanian Romanian Sign Language Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sateré-Mawé Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Torres Strait Creole Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
20 N’ụbọchị mbụ n’izu,+ Meri Magdalin bịara n’ili ncheta ahụ n’isi ụtụtụ, mgbe ọchịchịrị ka gbara. O wee hụ na a kwapụwo nkume n’ili ncheta ahụ.+ 2 Ya mere, ọ gbaara ọsọ bịakwute Saịmọn Pita na onye ọzọ ahụ bụ́ onye na-eso ụzọ Jizọs,+ bụ́ onye Jizọs hụrụ n’anya nke ukwuu, o wee sị ha: “Ha ebupụwo Onyenwe anyị n’ili ncheta ahụ,+ anyị amaghịkwa ebe ha dọbara ya.” 3 Pita+ na onye ọzọ ahụ bụ́ onye na-eso ụzọ Jizọs wee gawa n’ili ncheta ahụ. 4 Ee, ha abụọ malitere ịgba ọsọ; ma onye ọzọ ahụ bụ́ onye na-eso ụzọ Jizọs gbanahụrụ Pita wee buru ụzọ rute n’ili ncheta ahụ. 5 Mgbe o hulatara, ọ hụrụ ka ákwà ozu ndị ahụ wụsa n’ebe ahụ,+ ma ọ banyeghị. 6 Saịmọn Pita sokwa ya n’azụ bịarute, wee banye n’ime ili ncheta ahụ. O wee hụ ákwà ozu ndị ahụ wụsa n’ebe ahụ,+ 7 hụkwa ákwà e kere ya n’isi, nke na-awụsaghị n’ebe ákwà ozu ndị ahụ dị, kama a fụkọtara ya iche debe n’otu ebe. 8 Ya mere, n’oge ahụ, onye ọzọ ahụ bụ́ onye na-eso ụzọ Jizọs, nke bu ụzọ rute n’ili ncheta ahụ, banyekwara. Ọ hụkwara wee kwere. 9 N’ihi na ha aghọtabeghị ihe e dere n’Akwụkwọ Nsọ nke kwuru na ọ ghaghị isi ná ndị nwụrụ anwụ bilie.+ 10 Ndị na-eso ụzọ ya wee laghachi n’ebe obibi ha. 11 Otú ọ dị, Meri guzo n’èzí n’akụkụ ili ncheta ahụ, na-akwa ákwá. Mgbe ọ nọkwa na-akwa ákwá, o hulatara ka o nyoba anya n’ili ncheta ahụ, 12 o wee hụ ndị mmụọ ozi abụọ+ yi uwe ọcha ka ha nọ ọdụ n’ebe ahụ ozu Jizọs dịbu, otu nọ n’ebe isi, otu nọkwa n’ebe ụkwụ. 13 Ha wee sị ya: “Nwaanyị, gịnị mere i ji na-akwa ákwá?” O wee sị ha: “Ha ebupụwo Onyenwe m, amaghịkwa m ebe ha debere ya.” 14 Mgbe o kwusịrị ihe ndị a, ọ tụgharịrị wee hụ Jizọs ka o guzo, ma ọ ghọtaghị na ọ bụ Jizọs.+ 15 Jizọs sịrị ya: “Nwaanyị, gịnị mere i ji na-akwa ákwá? Ònye ka ị na-achọ?”+ Ebe o chere na ọ bụ onye na-elekọta ubi ahụ, ọ sịrị ya: “Nna anyị ukwu, ọ bụrụ na ọ bụ gị bupụrụ ya, gwa m ebe i debere ya, m ga-eburukwa ya.” 16 Jizọs sịrị ya: “Meri!”+ Nwaanyị ahụ tụgharịrị, sị ya, n’asụsụ Hibru: “Rabonaị!”+ (nke pụtara “Onye Ozizi!”) 17 Jizọs sịrị ya: “Kwụsị ịrapara m n’ahụ́. N’ihi na arịgobeghị m gakwuru Nna m. Ma gakwuru ụmụnna m,+ sị ha, ‘Ana m arịgokwuru Nna m+ na Nna unu nakwa Chineke m+ na Chineke unu.’”+ 18 Meri Magdalin bịara kọọrọ ndị ahụ na-eso ụzọ Jizọs, sị: “Ahụrụ m Onyenwe anyị!” kọọkwara ha na ọ gwara ya ihe ndị a.+ 19 Ya mere, mgbe chi jiwere n’ụbọchị ahụ, bụ́ ụbọchị mbụ n’izu,+ ọ bụ ezie na a kpọchiri ọnụ ụzọ ebe ndị ahụ na-eso ụzọ Jizọs nọ n’ihi egwu+ ha na-atụ ndị Juu, Jizọs bịakwara+ guzoro n’etiti ha, sị ha: “Udo dịrị unu.”+ 20 Mgbe o kwusịrị nke a, o gosiri ha ma aka ya ma akụkụ ya.+ Ndị ahụ na-eso ụzọ wee ṅụrịa ọṅụ+ mgbe ha hụrụ Onyenwe anyị. 21 Jizọs wee sị ha ọzọ: “Udo dịrị unu. Dị nnọọ ka Nna m ziteworo m,+ mụ onwe m na-ezigakwa unu.”+ 22 Mgbe o kwusịrị ihe a, ọ fụrụ ha ikuku wee sị ha: “Natanụ mmụọ nsọ.+ 23 Ọ bụrụ na unu agbaghara ndị ọ bụla mmehie ha,+ a gbagharawo ha mmehie ndị ahụ; ọ bụrụ na unu agbagharaghị mmehie nke ndị ọ bụla, a gbagharaghị ha.”+ 24 Ma Tọmọs,+ otu n’ime mmadụ iri na abụọ ahụ, onye a na-akpọ Ejima, esoghị ha nọrọ mgbe Jizọs bịara. 25 Ya mere, ndị ọzọ bụ́ ndị na-eso ụzọ Jizọs sịrị ya: “Anyị hụrụ Onyenwe anyị!” Ma ọ sịrị ha: “Ọ bụrụ na mụ ahụghị apa ntu n’aka ya, rụnyekwa mkpịsị aka m n’apa ntu ndị ahụ, rụnyekwa aka m n’akụkụ ya,+ agaghị m ekweta ma ọlị.”+ 26 Mgbe ụbọchị asatọ gasịrị, ndị na-eso ụzọ ya nọ ọzọ n’ime ụlọ, Tọmọs sokwa ha nọrọ. Jizọs bịara, ọ bụ ezie na a kpọchisịrị ụzọ akpọchi, o guzokwara n’etiti ha wee sị: “Udo dịrị unu.”+ 27 O wee sị Tọmọs: “Rụnye mkpịsị aka gị n’ebe a, lee aka m, werekwa aka gị+ rụnye n’akụkụ m, kwụsịkwa ịbụ onye na-adịghị ekweta ihe kama na-ekweta.” 28 Tọmọs wee sị ya: “Onyenwe m na Chineke m!”+ 29 Jizọs sịrị ya: “Ọ̀ bụ n’ihi na ị hụrụ m ka i ji kweta? Obi ụtọ na-adịrị ndị na-ahụghị ihe ma kweta.”+ 30 N’ezie, Jizọs mekwara ọtụtụ ihe ịrịba ama ndị ọzọ n’ihu ndị na-eso ụzọ ya, bụ́ ndị a na-edeghị n’akwụkwọ mpịakọta a.+ 31 Ma e dere ihe ndị a+ ka unu wee kwere na Jizọs bụ Kraịst, Ọkpara Chineke, ka unu wee nwee ndụ site n’aha ya n’ihi na unu kweere.+